Sanduuqa Lacagta ee McKnight ee loogu talagalay Neuroscience (MEFN) ayaa ku dhawaaqay saddexda qaatayaasha ah ee $600,000 oo ah deeq-lacageed iyada oo loo sii marayo 2020 McKnight Innovations Technolog in Auroscience Awards, iyada oo loo aqoonsanayo mashruucyadan awooddooda aasaasiga ah ee wax looga beddelo habka cilmi-baarista maskaxda. Mid kasta oo ka mid ah mashruucyada ayaa heli doona isku-darka $200,000 labada sano ee soo socota, taasoo horumarinaysa horumarinta tikniyoolajiyaddan aasaasiga ah ee loo adeegsado khariidaynta, kormeerka, iyo moodelidda shaqada maskaxda. Talaabooyinka 2020 waa:
Eva Dyer, Ph.D., Machadka Teknolojiyadda Georgia & Emory University, kaasoo abuuraya algorithms barashada mashiinka si loo barbardhigo xog uruurinta ballaaran ee dhaqdhaqaaqa neerfaha oo laga helo labadaba qaab naqshadeyn heer sare ah iyo kuwa neeron ah oo u dhigma gobollada gaarka ah iyo dabeecadaha xayawaanka si xor ah u dhaqma.
Rikky Muller, Ph.D., oo ka tirsan Jaamacadda California - Berkeley, kaas oo naqshadeeya isla markaana dhisaya mashruuc xawaare sare oo xawaare sare leh kaas oo mashruuci kara iftiinka 3D ee maskaxda xawaaraha neural, marar badan ka dhakhsaha badan kuwa hadda jira, oo sidaas u maareynaya kumanaan kumbuyuutarro neeronis-kooris ah oo si sax ah u sareeya.
Kai Zinn, Ph.D., Machadka Teknolojiyadda ee California, kaas oo horumarinaya qaab qaab, qaali ah oo waxtar leh oo ah borotiinka hiddo-wadayaasha sida anti-ka iyo qalliinka unugyada neural si markaa cilmi-baarayaashu ula socon karaan is-dhexgalka borotiinka iyagoo adeegsanaya isku-darka unug-sare, aalad leh codsiyo badan oo suurtagal ah oo loogu talagalay cilmi-baarista maskaxda.
Tan iyo markii curyaamiinta McKnight ee Tiknolojiyadda lagu sameeyay Abaalmarinta Neuroscience Award waxaa la aasaasay 1999, MEFN waxay ku tabarucday wax ka badan $14.5 milyan tikniyoolajiyad cusub oo loogu talagalay neuroscience iyada oo loo marayo habka abaalmarinta. MEFN waxay si gaar ah u daneyneysaa shaqo qaadata qaabab cusub oo wajiyo cusub u ah sare u qaadista awoodda lagu habeeyo laguna falanqeeyo shaqada maskaxda. Teknolojiyada lagu sameeyay taageerada McKnight waa in ugu dambeyntii loo diyaariyaa saynisyahano kale.
Markud Meister, Ph.D., gudoomiyaha gudiga abaalmarinta iyo Anne P. iyo Benjamin F. Biaggini, oo ah borofisar ku takhasusay cilmiga cilmiga bayoolajiga ayaa yidhi: at Caltech. Sannadkan, waxaan la kulannay xulasho adag oo ka mid ah horumarinnada xiisaha badan, abaalmarinnadayadu waxay ku dheehan tahay tiro balaaran, laga soo bilaabo qaabab kombuyuutar oo loogu talagalay xogta weyn ee maskaxda, ilaa indhaha wanaagsan ee loo adeegsado xakameynta guluubyada iftiinka, ilaa istiraatiijiyad xasaasiyadeed oo loogu talagalay sahaminta borotiinka. muujinta ee neurons. "
Guddiga xulashada sanadkaan sidoo kale waxaa ka mid ah Adrienne Fairhall, Timothy Holy, Loren Looger, Mala Murthy, Alice Ting, iyo Hongkui Zeng, kuwaas oo sanadkaan ka doortay Abaalmarinada Tiknolojiyadda ee Abaalmarinta Neuroscience Abaalmarino aad u sareeya oo ah 89 codsadeyaal.
Waraaqaha u jeedada 2021-ka Cusbooneysiinta Teknolojiyada ee Abaalmarinta Neuroscience ayaa la filayaa Isniinta, Diseembar 7, 2020. Ogeysiis ku saabsan geeddi-socodka 2021 ayaa dhici doona Sebtember. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan abaalmarinta, fadlan booqo www.mcknight.org/programs/the-mcknight-endowment-fund-for-neuroscience/technology-awards
2020 Cusbooneysiinta Teknolojiyadda McKnight ee Abaalmarinta Neuroscience
Eva Dyer, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Wallace H. Coulter waaxda cilmiga biomedical, Machadka Teknolojiyadda Georgia & Emory University
Rikky Muller, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Injineeriyada Korantada iyo Sayniska Kombiyuutarka, Jaamacadda California - Berkeley